ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဂွမ်ဂျူးဆု မှတ်တမ်းများ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဂွမ်ဂျူးဆု မှတ်တမ်းများ
ကိုရီးယား သမိုင်းမှာ ဂွမ်ဂျူး အရေးခင်း အထိမ်းမှတ် သစ်ပင်ကို ပြုစုပျိုးထောင် ခွင်.ရတဲ. ပထမဦး ဆုံး နိုင်ငံခြားသားပါတဲ.
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဂွမ်ဂျူးဆုယူအပြီး တွေ့ ရတာ ပုံရိပ်က ထည်ထည်ဝါ၀ါခန့် ခန့် ငြားငြား မြသူတိုင်းရှု့ ငေးလောက်ပါတယ် (31-1-2013)
ဒီည အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ. ထမင်း အတူစား မည်. သရုပ်ဆောင်များ
ဂွမ်ဂျူး စီတီးဟောသွာရောက် လေ.လာစဉ်က 31.1.2013